Inona no atao hoe risography? | Creatives Online
Risography dia teknika fanontam-pirinty izay tsy fantatra hatramin'izao, saingy nivoatra izany tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny tombony azony. Mikasika ny rafitra fiasany dia azo lazaina fa mitovy amin'ny an'ny copier, na ny mpanonta printy ecran. Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ity rafitra ity dia ny tsy mila mandany fotoana na loharano maro. Amin'ny alàlan'ny fisian'ny "kilema" amin'ny fanontana azy, dia asehon'izy ireo ho vita tanana ny vokatra.
Raha vao jerena dia teknika tsotra izany, saingy tsy maintsy mandinika lafin-javatra maromaro ianao. Ny vokatra farany dia manaitra, noho ny hamafin'ny loko, ny ara-nofo sy ny tonga lafatra vita. Ahoana anefa no hisarihana mpanaraka isan'andro?
1 Inona no atao hoe risography?
2 Ahoana no fiasan'ny risography?
3 Ny tombony amin'ny risography
4 Fepetra amin'ny fampiasana risography
5 Fanomanana rakitra
Inona no voakasik'izany la risography?
La Risography dia fomba fanontam-pirinty nomerika haingam-pandeha amin'ny tany fisaka sy mitohy. Izy io dia noforonin'ny Riso Kagaku Corporation. Izy io dia natao indrindra hanaovana pirinty lehibe sy dika mitovy. Antsoina koa hoe mpanonta-duplicator.
Ho an'ny risography, Azo ampiasaina ny ranomainty monochrome toy ny fluorine mavokely sy voasary, volamena, volomparasy, mavo, mainty, ary turquoise. Ny ranomainty dia mangarahara fa tsy manjavozavo, ka raha manonta loko iray mihoatra ny iray hafa isika, dia hisy loko fahatelo havoaka.
Ahoana no fiasan'ny risography?
Ny "master" na ny môdely dia noforonina mifototra amin'ny tany am-boalohany notarafin'ny milina. Ny lavaka kely dia vita amin'ny rafitra mafana ary mifanaraka amin'ny faritry ny tany am-boalohany. Ny stencil dia mihodidina ny amponga misy ranomainty ary ny ranomainty dia mivoaka avy ao amin'ireo lavaka kely. Rehefa mihodina amin'ny hafainganam-pandeha ambony ny amponga, dia mandalo ao anaty milina ny taratasy mba hahazoana printy.
Ny mpanonta ampiasaina amin'izany dia milina misy roller stencil. Mivezivezy amin'ny tsipika tsy miovaova toy ny andalana, tsipika fanontana, mandroso sy miverina. Ny fahatsapana dia atao amin'ny fiampangana elektrika kely izay miditra ao amin'ny fitaovana miaraka amin'ny fanampian'ny fiampangana tsara, ny iray miiba, una Korrente ny una líNea eléctfangatahana, una Korrente mifandimbya o Korrente mivantanaa. Risography dia afaka manonta amin'ny karazana taratasy sy habe, fa ireto Tsy maintsy tsy misy coating izy ireo ary tsy matevina loatra.
Ity dia afaka manana tsipika fanontana tokana, izany hoe, tsipika iray ihany isaky ny mandeha. Ity teknika ity dia mampiasa ranomainty tsy misy resin, vita amin'ny fototra soja, izay tsy misy solvents volatile. Izy io dia ampiasaina amin'ny famokarana afisy, katalaogy, karatra, fanzines, sns.
Ny tombony amin'ny risography
Afaka manao fampisehoana ianao hazakazaka fohy amin'ny vidiny mora. Na dia betsaka aza ny isan'ny dika mitovy, ny ambany ny vidiny isaky ny dika mitovy.
Ity teknika ity manaja ny tontolo iainana amin'ny fanaovana pirinty.
Ity mpanonta ity mandany angovo kely noho ny fizotrany mangatsiaka.
Azo piesy tena original.
Ny vokatra dia manana a endrika 'handmade' mitovy amin'ilay ananantsika amin'ny fanontana ecran.
Fepetra amin'ny fampiasana risography
Mba hampiasana ity teknika ity dia mila mandinika lafin-javatra maromaro ianao:
Tsy maintsy manaova antontan-taratasy nomerika maromaro ho an'ny loko tsirairay. Ireo antontan-taratasy ireo dia tsy maintsy miloko volondavenona na tsy maintsy atao amin'ny fampiasana fanasarahana loko.
matetika, ny endrika taratasy azonao atao pirinty dia A4 na A3. Na dia misy endrika hafa aza.
Ity karazana antontan-taratasy ity tsy manaiky ny fanaovana pirinty bleed izy ireo. Noho izany, ny faritra fanontam-pirinty amin'ny A4 dia 19 x 27,7cm raha amin'ny A3 kosa dia 27,7 x 40cm.
Ho an'ny Ny lanjan'ny taratasy dia eo anelanelan'ny 50 sy 210g.
Mba hisorohana ny fananganana ranomainty tsy mitovy, ny marika na ny fitohanana ao amin'ny mpanonta, tsara indrindra ny manala ranomainty be dia be.
Rehefa manomana rakitra nomerika Mba handefasana azy ireo any amin'ny orinasa mpanonta dia tsy maintsy amin'ny endrika PDF, JPEG, Illustrator na InDesign izy ireo. Ny zava-dehibe tokony hotadidina dia ny hoe ny endri-tsoratra dia tsy maintsy misy dian sy ny sary tafiditra. Ny milina riso dia mandika ny loko amin'ny grayscale ka tokony ho grayscale ny rakitrao.
Araka ny efa voalaza teo aloha, ny loko dia tsy maintsy misaraka amin'ny rakitra na sosona samihafa. Raha misy faritra misy ranomainty midadasika ny rakitrao, dia tokony hanana opacity 90% ny mainty, satria raha hanome pass mihoatra ny iray ianao, dia ialana ny fitohanan'ny taratasy. Farany, Tsara raha alefanao any amin'ny mpanonta ny vokatra farany, mba hananany mpitari-dalana amin'ny asanao.
Ankehitriny fantatrao bebe kokoa momba ity teknika ity sy ny fomba fanomanana azy halefa any amin'ny gazety. Vonona ny hanandrana azy ianao ary hamorona sangan'asa miavaka sy tany am-boalohany izay hanaitra ny mpanjifanao amin'ny ho avy. mialoha!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inona no atao hoe risography?